बिना मेकअप हिट भएकी यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि किन गरिनन मेकअप ? यस्तो अनौठो कारण –हेर्नुस् फोटोफिचरस
No Comments on बिना मेकअप हिट भएकी यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि किन गरिनन मेकअप ? यस्तो अनौठो कारण –हेर्नुस् फोटोफिचरस
No Comments on अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकेहि समयपछी ….. (भिडियो)
No Comments on धनगढी बसपार्कमा कु टपि ट ग री ह त्या गर्ने ४ जना पक्राउ
धनगढीमा कु ट पि ट गरी ह त्या गर्ने ४ जना पक्राउ परेका छन्। आज बिहान १२ः३० बजेको समयमा धनगढी ४ बसपार्क प्रतिक्षालयमा एक जना पुरुष मृ त अ वस्था मा फेला परेका थिए । बसपार्क प्रतिक्षालयमा पुरुषको शव फेला भन्ने जानकारीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले टा उ कोमा चो ट प टक ला गे को र गता म्य अ वस्थामा पुरुषको शव फेला पारेको थियो। प्रहरीले घटनास्थलको अनुसन्धान क्रममा सो स्थानमा रहेका सिसिटिभि फुटेजको आधारमा ४ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेमा धनगढी उप महानगरपालिका १ त्रिबेणी चोकका १८ बर्षिय दिपेन्द्र भन्ने दिपान्सु पौडेल, डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका घर भई हाल कञ्चनपुर भिमदत्तनगर ३ का १९ बर्षिय प्रबिण ऐर, डोटी पुर्वी चौकी गाउँपालिका ४ का २० बर्षिय अनिल कुवँर र कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका १का १८ बर्षिय युवराज शाहीलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जादाँ निज अपरिचित मृतक राती सुती रहेको समयमा निजको खल्तीमा रहेको पैसा चेकजाँच गरी पैसा लगी कु ट पि ट ग री ह त्या ग रे को हुदाँ उनीहरुलाई खोज तलास गर्दै जादाँ धनगढी उपमहानगरपालीका बसपार्क एरियाबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट म्यादथप भई थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर मृतकको अझै पहिचान भने हुन सकेको छैन । मृतक वर्ण गँहु गोरो, उचाई ५ फिट ६ ईन्च , बर्ष अन्दाजी २५-२६ को, बायाँ हातको पाखुरामा नागको ट्याटु, माथिल्लो शरिरमा टाटेपाटे कलरको भेष्ट र तल्लो शरिरमा निलो कालो कलरको जिन्स पाईन्ट लगाएको मृतकका आफन्तको पहिचान हुन नसकेको हुदाँ पहिचान गर्ने कार्य भई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
No Comments on लकडाउनमा माईत गएकी श्रीमतीलाई ‘डिभोर्स दिन्छु’ भन्दै शिशिर भण्डारीले प्रयाँक गरेपछि । श्रीमतीको जवाफले शिशिर आफै फसे (भिडियो हेर्नुस)
लकडाउनको समयमा बिभिन्न सामाजिक काम गर्दै फुर्सदको समयमा परिवारसँग रमाईलो गर्दै आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानल शिशिर भण्डारी इन्टरटेनमेन्टलाई पनि अगाडि बढाईरहेका शिशिर भण्डारीले च्यानलमा अर्को भिडियो ल्याएका छन् । प्रयाँक अन वाईफ शिर्षकको उक्त भिडियोमा शिशिरले आफ्नी श्रीमतीलाई रमाईलो प्रयांक गरेका छन्, जसमा उनले माईत गएकै कारण आफ्नी श्रीमतीलाई गाली गर्दछन् । डिभोर्सको कुरा निस्किएपछि श्रीमतीको उत्तरले शिशिर आफै फस्छन् ।
छोटो समयमै शिशिरको नयाँ च्यानललाई सबैले रुचाउँदैछन् र उनको श्रीमतीसँगको जोडीलाई पनि सबैले रुचाएका छन् । पहिलो पटक प्रयांक गरेका शिशिरले दर्शक र श्रीमतीसँग अन्तिममा माफी माग्दै उहाँहरुकै चाहना अनुरुप प्रयांक गरेको बताए । शिशिरको यो भिडियोलाई धेरैले निकै रमाईलो मानेका छन् । शिशिरले आफ्नो यस युट्युब च्यानलबाट पनि सामाजिक कामहरु अगाडि बढाउँदैछन् । भिडियो हेर्नुस
No Comments on जङ्गबहादुरका ती रोचक दिनहरू !
एसईई गत वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्नुपर्नेमा जोड
No Comments on एसईई गत वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । एसईई परीक्षा गत वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्न निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन र अभिभावक संघले दबाब दिइरहेका छन् ।
संक्रमणको अवस्था भयाभह भएको बेला एसईई परीक्षा सम्भव छैन नरहेको र गत वर्षमा जस्तै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरियोस् भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
गत वर्ष दैनिक ५ जना कोभिड संक्रमणमा परिरहेका बेला विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको अन्तिम परिणाम निकालियो, यस पटक यो संख्या बढेर ८ हजार पुगेको छ, अवस्था हेरेर पनि सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अभिभावकहरुको माग रहेको छ ।
यतिबेला विद्यालय र अभिभावकहरुका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयमाथि चौतर्फी दबाब परेको बुझिएको छ । चौतर्फी विवादका बिच मन्त्रालय र परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरु पनि एसईई विगत वर्षमा जस्तै आन्तरिक मूल्यांकनमा आधारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका एक स्रोतले जनाएको छ ।
टिकटकमा खुबै रुचाएकी एकदमै सुन्दर सशस्त्र प्रहरी महिलाका रमाइला टिकटक भिडियो (भिडियो)
No Comments on टिकटकमा खुबै रुचाएकी एकदमै सुन्दर सशस्त्र प्रहरी महिलाका रमाइला टिकटक भिडियो (भिडियो)
हिमकला लिम्बू नाम गरेकी उक्त महिलको टिकटक भिडियोहरु निकै नै लोकप्रिय छन । उनका भिडियोहरु टिकटकमा लाखौ पटक हेरुन्छन । त्यस्तै लाइक र कमेन्ट पनि उत्तिकै आउने गरेका छन उनको भिडियोमा ।
अब हेरौ उनै हिमकला लिम्बुका रमाइला टिकटक भिडियोहरु: हेर्नुहोस।।।
No Comments on मामाभान्जी रङ्गेहात फेला, फसाउन यस्तो ष डय न्त्र ग रेको भन्दै बुवा मिडियामा, खुल्यो नसोचेको गाे प्य र हस्य (भिडियो सहित)
मोरङको पथरी सनिस्चरे- १० मा एउटा घिनलाग्दो घटना घटेको छ । मामा भान्जी साइनो पर्ने २६ बर्षिय युवा र लगभग १६ बर्षकि युवतीबीच यस्तो काम भएको हो ।
स्थानियका अनुसार त्यो बेलुका २ जनानै नसामा रहेको जनाएका छन् । युवतीले आफुलाई ज बर्ज स्ति गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि ति युवालाइ इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले पक्राउ गरेको छ । युवकको घरमा पुग्दा यस्तो काम सहमतिमा २ जनाले नसाको सुरमा गरेका हुन्, स जा य हुँदा २ जनालाईनै हुनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका हुन् ।
उनलाई प्रहरीले सोहि दिन पक्राउ गरेको जनाएका छन् । ति युवकलाइ फसाउनलाइ सबैको खेल रहेको भन्दै आफन्त र गाउँलेहरू आ क्रो शित भ ए का छन । उनीहरुले नसोचेको भित्री रहस्य खोलेका छन । मोबाइलमा यस्ता प्रमाण देखाउँदै उनीहरुले यस्तो सम्म सुनाए कि सुन्ने सबै चकित बने । सुरुदेखि को सम्पूर्ण नालीबेली यसरी सुनाए तल भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला
Continue reading “मामाभान्जी रङ्गेहात फेला, फसाउन यस्तो ष डय न्त्र ग रेको भन्दै बुवा मिडियामा, खुल्यो नसोचेको गाे प्य र हस्य (भिडियो सहित)”
९ व’र्षको ब’च्चाले गएर खु’ट्टा समातेर ब’चाइदिनु भनेर आग्रह गर्दा पनि कसैले गरेनन् सहयोग(भिडियो)
No Comments on ९ व’र्षको ब’च्चाले गएर खु’ट्टा समातेर ब’चाइदिनु भनेर आग्रह गर्दा पनि कसैले गरेनन् सहयोग(भिडियो)
आफ्नै कारखानामा काम गर्ने ब्यक्तिको ज्या न लिँदा पनि नजिकै बसेका मालिकले कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । दुई मिटर अगाडी मालिकको कोठा छ । घरमा पसेर पुरुषलाई हा’त पा’त गर्दा, श्रीमती माथि पनि त्यस्तै गर्दा र ९ वर्षको बालक रोइ कराई गर्दा पनि किन सहयोग गर्नुभएन ? मालिकलाई प्रश्न गर्दा उनले भने, मैले बारम्बार सम्झाई रहेको थिएँ । इ’टाले हा ने पछि उनीहरु आएका हुन् ।
मान वहादुर घिसिङको सबैको सामुन्ने मृत्यु भयो । मान वहादुरको श्रीमती र छोरालाई पनि उनीहरुले त्यसै गरे । सानो ९ वर्षको ब’च्चाले गएर खु’ट्टा समातेर मेरो बुवा आमालाई ब’चाइदिनु भनेर आग्रह गर्दा पनि मालिकले वास्ता नगरेको महिलाको भनाई छ । हामीलाई यस्तो गर्दा सबैले टाढावाट हेरेर बसे । छोरो टा’उको भुईमा ब जा’रेर रो’यो, मैले पनि सबैसंग रुँ’दै गु’हार माँगे । तर सबैले हेरेर बस्यो कोही पनि बचा’उन आएनन् ।
म उनलाई ब’चाउन जाँदा तेरो श्री’मान र तँला’ई एउटै चि’हान बनाइदिन्छौं भने, महिि’लाले गु’नासो गर्दै भनिन् । मानवहादुर दिनेश लामाको कारखानामा काम गर्थे । मानवहादुर पटक पटक हल्ला गर्ने र क्सी खाने गर्थे । त्यही क्रममा वि’वाद भएको रहेछ । दुई जनाबीच पहिला नै वि’वाद भएको रहेछ । नयाँ वर्षको समयमा नै हो । त्यही विषय बढ्दै गएर मान बहादुर माथि थप घ’टना भयो । कारखानाका मालिक दिनेशले बताए । भिडियो हेर्नुहोस